Larkin Campbell – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Darkest Minds (2018) Unicode မြို့တစ်မြို့မှာ ကလေးတွေ အကြောင်းရင်းမရှိ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသေဆုံးရာကနေ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စတင်ပါတယ်…ရောဂါရှာမရ ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးအရေအတွက်ဟာများသထက်များလာပေမယ့်တစ်ဖက်မှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။မိဘများရဲ့ပူဆွေးသောကတွေကိုလျစ်လျူရှုပြီး အစိုးရကအာရုံစိုက်တာကတော့ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပါပဲ။ ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာ စွမ်းရည်တွေရှိတယ်လို့ အစိုးရကသိပြီးတဲ့နောက်ကလေးတွေကို ကုသကာကွယ်ဆေးပေးခန်း အမည်ခံအကျဉ်းစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတော့တယ်။ဒီအကျဉ်းစခန်းကို အသက်၁၀နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးလေးနာမည်ကတော့ ရူဘီ ဒေလီပါပဲ။ သူမတူရှားပါးလှတဲ့ စွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အစွမ်းကြီးမားသူဆိုရင်သတ်ပစ်တဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာ သူဘယ်လိုရုန်းကန်အသက်ရှင်မလဲ?အဲ့ဒီစခန်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အောင်မြင်ပါ့မလား?အကျဉ်းစခန်းမှာလဲ ကလေးတွေချုပ်နှောင်ခံထားရပေမယ့်အပြင်လောကမှာရောဘာတွေဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီလဲ?အသက်ငယ်ငယ်ရူဘီလေး ဒီအခက်အခဲတွေကိုသူမရဲ့သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ကျော်ဖြတ်လို့ရောအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာစိတ်ဝင်တစားဇာတ်လမ်းရဲ့အဟုန်မှာလိုက်ပါစီးမျောအဖြေရှာကြည့်ပါ။ဒီလို စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်လေးတွေတစ်ယောက်ဆီမှာကိုယ်ပိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်…. အဲဒါတွေကတော့ အပြာရောင် အစိမ်းရောင် အဝါရောင်ဟာသာမာန်စွမ်းအားသာရှိကြပြီးတော့ အနီရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကတော့ရှားပါးလွန်းတဲ့ စွမ်းအားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အန္တရာယ်အရှိဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ရူဘီလေးကတော့ လိမ္မော်ရောင်အစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်…ဒီကားဟာ X Men ကားနဲ့ဆင်တူပုံစံဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအားရှင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ မငြီးမငွေ့ကြည့်ရှုရမှာတော့အာမခံပါတယ်။ သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ အကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ဇာတ်လမ်းကိုပေါ့သွားမှာစိုးရိမ်ကာ အညွှန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအကျဉ်းချုံးထားတဲ့အတွက် အညွှန်းဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့မသိနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကိုဒေါင်းလော့ဆွဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် The Darkest Minds (2018)ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ကေလးေတြ အေၾကာင္းရင္းမရွိ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္လဲက်ေသဆုံးရာကေန ဒီဇာတ္လမ္းဟာ စတင္ပါတယ္…ေရာဂါရွာမရ ဘာေၾကာင့္ရယ္မွန္းမသိ ေသဆုံးသြားတဲ့ကေလးအေရအတြက္ဟာမ်ားသထက္မ်ားလာေပမယ့္တစ္ဖက္မွာေတာ့အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့ကေလးေတြလဲရွိေနပါေသးတယ္။မိဘမ်ားရဲ႕ပူေဆြးေသာကေတြကိုလ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အစိုးရကအာ႐ုံစိုက္တာကေတာ့ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့ကေလးေတြရဲ႕ခံႏိုင္ရည္နဲ႔ ထူးျခားတဲ့စြမ္းရည္ေတြကိုပါပဲ။ ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့ကေလးေတြမွာ စြမ္းရည္ေတြရွိတယ္လို႔ အစိုးရကသိၿပီးတဲ့ေနာက္ကေလးေတြကို ကုသကာကြယ္ေဆးေပးခန္း အမည္ခံအက်ဥ္းစခန္းေတြမွာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါေတာ့တယ္။ဒီအက်ဥ္းစခန္းကို ...
IMDB: 5.7/10 18,535 votes
Beowulf (2007) Unicode သူရဲကောင်းတို့ ခေတ်ကောင်းချိန်… Beowulf လို့ ခေါ်တဲ့ သူရဲကောင်းရဲ့ နာမည် ထွန်းထွန်းတောက်နေချိန်… တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘုရင် Hrothgar ရဲ့ တိုင်းပြည်မှာ မိစ္ဆာဆိုး တစ်ကောင်မွှေလို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး အစည်းပြေ မီးသေနေတဲ့ အချိန်… ကြံရာမရတဲ့ အဆုံး ဘုရင်ခမျာ Beowulf ကို ရှေ့တော်တင်သွင်းပြီး မိစ္ဆာကို တိုက်ထုတ်ခိုင်းရတော့တယ်… အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ တိုက်ထုတ်ပြီးနောက် ဒီအောင်မြင်မှုဟာ ဒီ့ထက်ပိုကြီးမားတဲ့ အမျက်ဒေါသနဲ့ လက်စားချေမှုကြီးတစ်ခုဆီကို ဦးတည်သွားတော့တယ်… မိစ္ဆာရဲ့ မိခင်ပါပဲ… ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှ တစ်ဆက်တည်းဆိုသလို ပျက်ဆီးခြင်းတရားတွေပါ ပါလာတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးမပေါ့… သူမဟာ Beowulf အတွက် အနိစ္စတရားလေလား… IMDB – 6.2/10, RT – 71% Back to the Future နဲ့ Forrest Gumps တို့ရဲ့ ...